China Pearlescent mika vovoka sy mpamatsy | Huajing
Ny vovoka mika pearlecent Huajing dia vita amin'ny wafers mika synthetic voafantina izay tsy mitovy amin'ny fluorophlogopite mahazatra. Satria izy io dia mika synthetic vaovao amin'ny alàlan'ny fampiasana raikipohy tsy manam-paharoa Huajing sy fitaovana famokarana hamokarana.
Vovoka mica Kilasy Kilasy
zavatra Famaritana anatiny loko fotsifotsy (Lab) haben'ny sombin-D90 (μm) sombiny habe D50 (μm) haben'ny sombiny D10 (μm) Fampiharana
-15 -15μm fotsy 98 12 F. 15 5 ～ 7 2 ～ 4 Andian-dahatsoratra Siver
5 ～ 25 5-25μm fotsy 98 22 ～ 25 10 ～ 13 5 ～ 7 Andiana volafotsy
10 F. 40 10-40μm fotsy 98 40 ～ 42 21 F. 24 10 ～ 12 Andiana volafotsy Magic andiany Chameleon Series
10 ～ 60 10-60μm fotsy 98 49 ～ 52 25 F. 28 12 F. 14 Andiana volafotsy Magic andiany Chameleon Series
20-120 20-120μm fotsy 98 108 ～ 113 58 ～ 60 25 F. 27 Andiana volafotsy
40 ～ 200 40-200μm fotsy 98 192 ～ 203 107 ～ 110 49 ～ 52 Magic andiany Chameleon Series
60 ～ 300 60-300μm fotsy 98 290 ～ 302 160 ～ 165 73 F 76 Magic andiany Chameleon Series
38 ~ 43% 10 ~ 14% 9 ~ 12% 0,16 ~ 0,2% 24 ~ 32% 0,2 ~ 0,3% 0,02 ~ 0,03% 0.15 ~ 0.3% 7-8
Fanoherana ny hafanana loko Ny hamafin'i Mohs fanoherana ny habetsahana resistivity ambonin'ny (Ω) Teboka mitsonika tanjaky ny puncture hafotsiany hiondrika
Vovon-tsakafo Miclescent Mica Powder
Izy io dia manana ny toetran'ny florine malefaka sy mangarahara ary ambany. Ny wafera indray dia mamaky ireto fizotry ny famokarana manaraka ireto: fisafidianana manokana, fanadiovana bisikileta, fikolokoloana am-pitandremana, fanasokajiana ultrasonika patanty ary fanamainana hafanana ambany. Ireo fizotrany ireo dia nanatsara ny teknolojia fanodinana mica maro tamin'ny famokarana mika tao anatin'ny 30 taona lasa .Ny fitaovana sasany dia noforonin'i Huajing .Koa ny vovo-dronono mika farany dia manana tombony amin'ny haben'ny sombin-javatra fanamiana, ny firafitra manify tonga lafatra ary ny hatevin'ny savaivony ambony. Ny vovoka mika synthetic Huajing no safidy tsara indrindra ho an'ny andian-tsarin'ny pigmenta perla, andiana magika ary andiana chameleon.
Ankoatr'izay, ny mika synthetic Huajing dia namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, ny habeny dia manodidina ny 10 ～ 900μm.
Inona avy ireo sokajy telo lehibe amin'ny piglecent piglescent?
Volom-boninkazo vita amin'ny perla, pigmentazy vita amin'ny perla, loko piglazazy sokajy sakafo
Pigment vita amin'ny perla indostrialy
Ny loko dia manankarena tokoa, ao anatin'izany: pigments effets pearlescent classical, pigment effets pearlescent kristal, pigment effets aluminium metaly miloko, pigmen effets effets pearlescent vita amin'ny loko maro, pigmentale effets maro-loko maro loko, pigmen effets effets pearlescent effets, pigment effets pearlescent effets sns. ., be mpampiasa amin'ny firakotra, plastika, fanontana, vera ary seramika.
Mba hamenoana ny filan'ny tsena dia kendrena ny hanatsarana ny fanavaozana ny mpanjifa amin'ny fampivoarana ny piglescent pigmentscent mba hanampiana ireo mpamorona piglescent pigmentcent hamaha olana isan-karazany amin'ny fangatahana tsena. Toy ny: manampy amin'ny fampivoarana ambaratonga marokoroko tsy mahazaka toetr'andro, mamaha tanteraka ny tontolo masiaka atrehin'ireo firakotra fiara sy plastika ivelany; Ny loko piglescent tsy misy vovoka dia mamaha ny olan'ny fandotoana vovoka sy ny fanaparitahana ary ny fanalana ny piglairesy vita amin'ny perla amin'ny pirinty fanontana; Ny lokon'ny perla manohitra ny mavo dia mamaha ny olan'ny mavo maizina sy ny masoandro mihamainty amin'ny plastika Ny fomba fitsaboana pigment manokana dia mifanaraka amin'ny filan'ny famoahana avo lenta sy ny pigment avo lenta amin'ny famokarana masterbatch loko plastika.
Mampiasa tanteraka ny fahaizantsika amin'ny famokarana mika sentetika, manohy manokatra faritra vaovao amin'ny fampiharana pigment izahay. Ohatra, ny vokatra fampiharana ny mari-pana avo lenta dia mahatonga ny pigmentant mahatanty ny fitsapana ny mari-pana avo lenta amin'ny fampiharana vera sy seramika ary mitazona ny fahamendrehan'ny lokon'ny loko.
Pigment vita amin'ny perla kosmetika
Miaraka amin'ny fampiroboroboana tsy tapaka ny indostrian'ny kosmetika, ny vokatra sy ny firafitry ny vokatra entin'ny pigmentale pigments dia nanjary nilaina bebe kokoa. Ny vokatra kosmetika dia vita amin'ny loko perla na marefo toy ny famirapiratana toy ny satin, na mamirapiratra toy ny diamondra. Mba hampitomboana ny maha-manintona ny vokatra, ny vokatra fikarakarana manokana dia nanomboka nampiasa loko vita amin'ny perla ihany koa hanatsarana ny endrik'ireo vokatra na hamoronana ny vokatr'ireo vokatra eo noho eo.
Ny piglescent pigmentscent izay ampiasaina amin'ny fanaovana kosmetika dia tsy maintsy esorina amin'ny hafanana avo ary ny asan'ny famokarana iray manontolo dia tokony ho aseptika.
Izy io dia ampiasaina mba hamokarana perla vita amin'ny volafotsy avo lenta sy tsy fahitana firavaka vokarin'ny perla, izay tsy vitan'ny mampiditra famirapiratana sy mamirapiratra vokatra fotsiny, fa koa misambotra hazavana mba hamoronana loko isan-karazany amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fitsipika fanelingelenana.
Ampiasaina amin'ny famokarana andiana chameleon, nolokoina toy ny chameleon, amin'ny alàlan'ny zoro fahitana samy hafa, dia azonao atao ny mahita ny fiovan'ny lokon'ny traikefa.
Pigment vita amin'ny perla vita amin'ny perla
Ilay antsoina hoe sakafo matsiro dia feno loko sy tsiro foana, ary ny fiainana sary miavaka dia miaraka amin'ny fotoana mahafinaritra. Ampio amin'ny vokatrao
Voninkazo vokarin'ny perla, manomboka amin'ny volafotsy, volamena ary ny fanelingelenana, hatramin'ny loko mena sy volontany mba hamoronana loko mazava sy famirapiratan-karena mihaja, andao hiaina ny matsiro mamirapiratra miaraka! Miaraha-mijery ny tontolon'ny mika kilasy sakafo!
Teo aloha: Orinasa mpanamboatra Muscovite amin'ny kilalao tsy misy poizina sy tsy misy tsirony - vovoka mika calcined - Huajing
Pigment vita amin'ny perla miorina amin'ny Mica